Poem of my life – Zox Zin Min
Category: Poem of my life
Written by Zox Zin Min May 13, 2011
မေမေ… တခုခု ဆိုရင်လေ… မေမေ… ကျနော့်မှာ ခိုလှုံစရာ ဆိုတာက မေမေပဲ ရှိခဲ့ဖူးတာကိုး… ဘ၀မှာ…. ငယ်ငယ်တုန်းက ကျနော် အမှား လုပ်မိတဲ့အခါ အဖေ့ကြိမ်လုံးအတွက် ခိုလှုံစရာ အမေ့ ထမိန်ပဲရှိပါတယ်…. ကျနော့်ကို အဖေရိုက်တဲ့ အခါ… အမေ့ ထမိန်စကို ဆွဲထားတဲ့ သားကို… ဟိုးတခါ… စစ်ထောက်လှမ်းရေးတွေ…. အမေ့ကို ဆွဲသွားကတုန်းလိုမျိုး…. အမေ့ ထမိန်စကို အမေ ဆောင့် မဆွဲသွားဘူး…. အမေ့သားလေး… အဖေ့ တုတ်ချက်တွေကို ဘယ်လောက်ကြောက်တယ်ဆိုတာ အမေသိတယ်… ကျနော်က အမှားအယွင်း သိပ်လုပ်တာမဟုတ်ဘူး… လိမ်လိမ်မာမာနေတဲ့ သား… အမေ့သားကြီးလို မဆိုးဘူး… အမေသိပါတယ်… ဒါမယ့် … တခါတခါလည်း ကျနော် မှားပါတယ် မေမေ… ခုတော့ ကျနော့် […]
ကျွန်တော် အမိမြန်မာ နိုင်ငံကို ပြန်ရောက်တဲ့ နေ့မှာပဲ သတင်းဆိုး တစ်ခုကို ကြားခဲ့ရ ပါတယ်။ လေဆိပ်မှာ ရှိနေတုန်း အဲယားလိုင်း ကတာဝန်ရှိသူ တစ်ဦးက ကျွန်တော့်ကို အပြေးအလွှား လာအကြောင်းကြား တာပါ။ ကျွန်တော့် အပေါ် အဖေလို၊ ကျွန်တော့်ဘက် ကလည်း ဖခင်တစ်ယောက်လို ချစ်ခင် ဆက်ဆံ ခဲ့တဲ့ ကျွန်တော့်ရဲ့ ယောက္ခထီး ကွယ်လွန်ဆုံးပါး သွားခဲ့ပါတယ်။ လက်ဆွဲအိတ် တွေကို လေဆိပ်မှာ ကျွန်တော်ထုတ်ဖို့ စောင်းဆိုင်းနေချိန်မှာ သူ့ကိုလည်း အသုဘချဖို့ ပြင်ဆင်နေပါတယ်။ ကျွန်တော်လည်း အကြောင်းကြား ချက်ကို ကြားသိရ ရချင်း လက်ဆွဲအိတ် တွေကို မယူပဲ အပြင်ကို ချက်ချင်းထွက်လာ ခဲ့လိုက်ပါတယ်။ အပြင်မှာ ကျွန်တော့် အဖေနဲ့ အမေရယ်၊ နောက်တခြား […]